Ailika Waxay Soo Bandhigeysaa Qeybta Codsiga ee Abuurka Korantada Cadceeda
1. Awoodda qoraxda ee isticmaalayaasha: Ilaha korontada ee yar yar oo u dhexeeya 10-100w waxaa loo isticmaalaa isticmaalka maalinlaha ah ee korontada meelaha fogfog oo aan koronto lahayn, sida plateaus, jasiiradaha, aagagga xoola-dhaqatada, xadka iyo wixii kale ee milateri iyo rayidba, sida nalalka , TV, Rikoor raadiye, iwm; 3-5kw saqafka qoyska Roobka-co ...
Waan Sharaxeynaa Faa'iidooyinka Gaarka ah ee Soo-Saarka Tamarta Qorraxda
1. Tamarta cadceedu waa tamar nadiif ah oo aan la koobi karayn, soona saarista tamarta qoraxda waa mid aamin ah oo la isku halleyn karo saameynna kuma yeelan doonto dhibaatada tamarta iyo waxyaabaha aan xasilloonayn ee suuqa shidaalka; 2, qorraxda oo ifaysa dhulka, tamarta qoraxda ayaa meel walba laga heli karaa, hiddo-wadaha tamarta qoraxda ...
Alikai Wuxuu Soo Bandhigayaa Waxyaabaha Lagu Qaddarin Doono Naqshadeynta Aaladda Soo-Saarka Qoraxda Guriga
1. Tixgeli deegaanka isticmaalkiisa dhalinta tamarta qoraxda ee gudaha iyo shucaaca qoraxda deegaanka, iwm; 2. Awoodda guud ee ay qaadi doonaan nidaamka dhalinta korontada iyo waqtiga shaqada ee rarku maalin kasta; 3. Tixgeli danab soosaarka nidaamka oo fiiri inuu ku habboon yahay ...
Kala soocida Qalabka Qalabka Qorraxda
Marka loo eego qalabka wax soo saarka ee unugyada sawir-qaadeyaasha qoraxda, waxaa loo kala qaybin karaa unugyada semiconductor ee ku saleysan silicon, unugyada filimada CdTe khafiifka ah, unugyada filimada CIGS khafiifka ah, unugyada filimada caatada ah ee dareemayaasha ah, unugyada maaddada dabiiciga ah iyo wixii la mid ah. Iyaga dhexdooda, unugyada semiconductor-ku-saleysan silicon-ku waxay u qaybsan yihiin ...
Qoondaynta Nidaamka Rakibaadda Sawir-qaadaha
Marka loo eego nidaamka rakibaadda ee unugyada Photovoltaic qoraxda, waxaa loo qaybin karaa nidaam rakibo oo aan isku dhafaneyn (BAPV) iyo nidaamka rakibaadda isku dhafan (BIPV). BAPV waxaa loola jeedaa nidaamka qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic system' ee ku dhegan dhismaha, kaas oo sidoo kale loo yaqaan "rakibaadda" sola ...
Qoondaynta Nidaamka Sawirada
Nidaamka tamarta qoraxda loo qaybiyaa wuxuu u qaybsan yahay nidaamka dhalinta koronto-ka-baxsan, nidaamka dhalinta tamarta sawir-qaadista ee ku xiran shabakadda iyo nidaamka dhalinta tamarta sawir-qaadista: 1. Nidaamka dhalinta qalabka korontada ka baxsan. Waxay badanaa ka kooban tahay qaybta unugyada qorraxda, iskudhaca ...
Dulmarka guud ee Module sawir qaade ah
Hal unug oo qorraxda ka mid ah si toos ah looma isticmaali karo ilaha tamarta. Awoodda korontadu waa inay ahaataa tiro hal xarig oo batteri ah, xiriir isku mid ah oo si adag isugu xirxira qaybaha. Qalabka 'Photovoltaic modules' (oo sidoo kale loo yaqaanno qoraxda qorraxda) ayaa ah udub-dhexaadka nidaamka dhalinta tamarta qorraxda, sidoo kale waa kan ugu soo dejinta badan ...
Faa’iidooyinka iyo Faa’iido-darrooyinka Nidaamka Sawir-qaadista Qoraxdu
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka nidaamka qorraxda qorraxda Tamarta qorraxda waa mid aan la koobi karin. Tamarta iftiimaya ee laga helo dusha sare ee dhulku waxay dabooli kartaa baahida tamarta adduunka ee 10,000 jeer. Nidaamyada cadceedda qoraxda lagu rakibi karo kaliya 4% lamadegaanka adduunka, ge ...
Hooska Guryaha, Caleemaha ama Xitaa Guano ee ku saabsan Module Sawir-qaadis ah saameyn kuma yeelan doono Nidaamka Abuurka Awoodda?
Unugga sawir-qaadista ee xannibaadda ayaa loo tixgelin doonaa inuu yahay adeegsiga culeyska, iyo tamarta ay soo saaraan unugyada kale ee aan xannibnayn waxay abuuri doonaan kuleyl, taas oo fudud in la sameeyo saameyn kulul. Sidaa darteed, jiilka korontada ee nidaamka sawir-qaadista waa la yareyn karaa, ama xitaa qaababka sawir-qaadista waa la gubi karaa.
Xisaabinta Awoodda ee Module Sawir-qaadis
Module sawir-qaade ku shaqeeya qorraxda wuxuu ka kooban yahay koronto qorraxda, koontaroole ku amraya, inverter iyo batteri; Nidaamyada korontada ee Solar dc kuma jiraan kuwa wax roga. Si loo sameeyo nidaamka soo saarista tamarta qorraxda waxay siin kartaa awood ku filan culeyska, waxaa lagama maarmaan ah in si kasta oo macquul ah loo doorto qayb kasta ...
Rakibaadda Goobta Qalabka Solar Photovoltaic
Rakibida goobta qorraxda ee pv qoraxda: dhismaha saqafka ama derbiga iyo dhulka, jihada rakibaadda: waxay ku habboon tahay koonfurta (nidaamka ka-reebitaanka mooyee), rakibidda Xagasha: loo siman yahay ama u dhow yahay rakibidda latitude-ka maxalliga ah, shuruudaha culeyska: xamuulka, culeyska barafka, shuruudaha dhul gariirka, diyaarinta iyo kala dheereynta ...
Qoondaynta Qalabka loogu talagalay Soo-saarista Taageerada Sawir-qaadaha
Wax soosaarka sawir-qaadista ee sheyga la taaban karo, oo inta badan loo adeegsado qalabka waaweyn ee sawir-qaadista, astaamaha maaddada ka muhiimsan, badiyaa sidoo kale waxaa lagu dhejin karaa oo keliya berrinka, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin in lagu rakibo xaalad aasaasi ah si ka fiican, qalabka qalabka ma aha oo kaliya inuu leeyahay stabili sare ...